प्रचण्ड ठूलै पीडामा छन् भन्ने कुृरा माक्र्स जयन्तीमा उनको भाषणबाट प्रष्ट हुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रियाबाट शहर पसेका प्रचण्डलाई फेरि जंगल नै जानुपर्ने बाध्याता कसले ल्याइदियो होला ? कतै ओली ले त होइन ?
केन्द्र र जिल्ला कमिटीको अधिवेशन छिट्टै हुन्छ : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छिट्टै पार्टीको केन्द्र र जिल्ला कमिटीको अधिवेशन हुने बताएका छन् । महालक्ष्मी नगरपालिका–६ स्थित सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेकपाले हालै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाएकाले चाँडै कमिटी पूर्ण हुने बताए ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संघीयताको मर्मअनुसार कर्म हुन नसकेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘आदिवासी जनजातिको मुद्दा, अधिकार र चासोका विषयमा उच्चस्तरीय संवाद’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयत्न भइरहेको बताए ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड विरक्तिएका छन् । कार्यदल भंग भएपछि उनी बढी निराश देखिन्छन् । त्यसैले होला, उनले कुनै ठाउँमा गएर अब आफूले कृषि पेशा गर्ने अभिव्यक्ति दिए । यो कुरा बालुवाटार वरपरकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कानेखुशी गरे । ओलीले यो कुरालाई खासै महत्व दिएनन् ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की धर्मपत्नी सीता दाहाल स्वास्थ्यलाभ गरी आज निवास फर्किएका छन् ।
सीता दाहालकाे स्वास्थ्यमा सुधार, निमाेनियाकाे संक्रमणमा कमी
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ ।